कुनै यहोवाको साक्षीले ‘अबदेखि म यहोवाको साक्षी हुन चाहन्नँ’ भनेर राजीनामा दिन सक्छन्‌ कि सक्दैनन्‌?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इटालियन इन्डोनिसियन इलोको उइघुर (सिरिलिक) उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एस्टोनियन ओसेसियन करेन (गः) काजाक किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक चोल जर्जियन जर्मन जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली डच डेनिश ताजिकी तारास्कान ताहिटी तेलगु तोजोलबल त्वी थाई नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फान्टे फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) बास्क बुल्गेरियन भलेन्सियन भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन मले मल्यालम माम माया माल्टिज म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लो जर्मन वलिसियन वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
सक्छन्‌। हाम्रो सङ्‌गठनको कुनै पनि सदस्यले दुई तरिकामा यसो गर्न सक्छन्‌:
औपचारिक अनुरोधद्वारा। कुनै पनि यहोवाको साक्षीले ‘अबदेखि म यहोवाको साक्षी हुन चाहन्नँ’ भनेर लिखित रूपमा वा मौखिक रूपमा राजीनामा दिन सक्छन्‌।
कामद्वारा। कुनै व्यक्तिले गरेको कामले पनि ऊ यहोवाको साक्षी हुन चाहँदैन भन्ने कुरा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा उसको सदस्यता स्वतः खारेज हुन्छ। (१ पत्रुस ५:⁠९) जस्तै, ऊ अर्कै धर्ममा लाग्न सक्छ र त्यही धर्ममा लागिरहन चाहेको हुन सक्छ।​—⁠१ यूहन्ना २:⁠१९.
कोही प्रचार र सभा जान छोड्‌यो भने नि? यस्तो अवस्थामा उसले राजीनामा दिएको ठहरिन्छ?
ठहरिंदैन। राजीनामा दिनु वा धर्म छोड्‌नु विश्वास कमजोर हुनुभन्दा फरक कुरा हो। प्रायजसो अवस्थामा कुनै व्यक्ति केही समयको लागि विश्वासमा कमजोर भयो अनि उपासनाका कार्यक्रमहरूमा भाग लिन छोड्‌यो भन्दैमा उसले परमेश्वरलाई त्याग्यो भन्न मिल्दैन। तर ऊ निराश भएकोले यस्तो अवस्थामा पुगेको हुन सक्छ। हामी ऊदेखि टाढा हुँदैनौं बरु उसलाई सान्त्वना दिन्छौं र मदत गर्छौं। (१ थिस्सलोनिकी ५:१४; यहूदा २२) यदि उक्त सदस्य मदत चाहन्छन्‌ भने मण्डलीका एल्डरहरू उसलाई आध्यात्मिक मदत दिन सधैं तयार छन्‌।​—⁠गलाती ६:१; १ पत्रुस ५:​१-३.
तर कसैलाई यहोवाको साक्षी भइरहन जबरजस्ती गर्ने वा दबाब दिने अधिकार एल्डरहरूलाई दिइएको छैन। कुन धर्म मान्ने भन्ने कुरा व्यक्ति आफैले निर्णय गर्न सक्छन्‌। (यहोशू २४:१५) मानिसले कसैको करकापमा परेर होइन, राजीखुसीले अनि मनैदेखि यहोवा परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ।​—⁠भजन ११०:३; मत्ती २२:⁠३७.
यहोवाका साक्षीहरू तिनीहरूको धर्म छोड्नेसित सङ्गतै गर्दैनन्‌ हो?
कहिलेकाहीं कसै-कसैलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो कदमले तिनलाई मण्डलीमा फर्कन मदत गर्न सक्छ।
यहोवाका साक्षीहरू परिवार टुक्राउँछन्‌ कि बलियो बनाउँछन्‌?
कहिलेकाहीं यहोवाका साक्षीहरूलाई परिवार टुक्राउनेहरू भनेर आरोप लगाएको पाइन्छ। तर के साक्षीहरूले साँच्चै परिवारमा समस्या निम्त्याउँछन्‌?